Multilingual Bible: Nepali New Revised Version, Jeremiah 31
Nepali New Revised Version, Jeremiah 31
1 परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ: “त्‍यस बेला म इस्राएलका सबै वंशका परमेश्‍वर हुनेछु, र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्‌।”
2 परमप्रभु यसो भन्‍नुहुन्‍छ: “तरवारबाट बाँचेका मानिसहरूले उजाड़-भूमिमा निगाह प्राप्‍त गर्नेछन्‌। म इस्राएललाई विश्राम दिनका लागि आउनेछु।”
3 परमप्रभु विगत समयमा हामीकहाँ यसो भन्‍दै देखा पर्नुभयो: “सधैँभरि रहने प्रेमले मैले तँलाई प्रेम गरेको छु। मैले तँलाई दया गरी खिँचेको छु।
4 म फेरि तँलाई निर्माण गर्नेछु, र हे कुमारी इस्राएल, तँ फेरि बनाइनेछस्‌। तँ फेरि आफ्‍ना खैँजड़ी लिएर आनन्‍द मनाउनेहरूका साथ नाचमा तँ निस्‍कनेछस्‌।
5 सामरियाका डाँड़ाहरूमा तैंले फेरि दाखका बोटहरू लगाउनेछस्‌। किसानहरूले ती रोप्‍नेछन्‌, र तिनका फल खानेछन्‌।
6 यस्‍तो दिन आउनेछ, जब एफ्राइमको पहाड़ी देशमा पहरादारहरू यसरी कराउनेछन्‌, ‘आओ, हामी सियोनमा परमप्रभु हाम्रा परमेश्‍वरकहाँ जाऔं’।”
7 परमप्रभु यसो भन्‍नुहुन्‍छ: “खुशीले याकूबको निम्‍ति गाओ। जातिमध्‍येका अग्रगण्‍यको निम्‍ति उच्‍च सोर निकाल। तिमीहरूको प्रशंसा सुनिओस्‌, र यसो भन, ‘हे परमप्रभु, आफ्‍नो प्रजा, इस्राएलका बाँचेकाहरूको उद्धार गर्नुहोस्‌’।
8 हेर, म तिनीहरूलाई उत्तर देशदेखि ल्‍याउनेछु, र पृथ्‍वीका कुना-कुनाबाट म तिनीहरूलाई जम्‍मा गर्नेछु। तिनीहरूका बीचमा अन्‍धा र लङ्गड़ा, गर्भवती आमाहरू र सुत्‍केरी वेदनामा परेका स्‍त्रीहरू हुनेछन्‌। तिनीहरूको एउटा ठूलो भीड़ फर्केर आउनेछ।
9 तिनीहरू रुँदै आउनेछन्‌। मैले तिनीहरूलाई फर्काएर ल्‍याउँदा तिनीहरूले प्रार्थना गर्नेछन्‌। म तिनीहरूलाई पानी भएका खोलाहरूका किनार-किनार डोर्‍याउनेछु, सीधा बाटोमा जहाँ तिनीहरूले ठेस खानेछैनन्‌। किनभने म इस्राएलको पिता हुँ, र एफ्राइमचाहिँ मेरो जेठो छोरो हो।
10 “हे जाति-जाति हो, परमप्रभुको वचन सुन। टाढ़ा-टाढ़ा समुद्र-किनारका देशहरूमा घोषणा गर: ‘इस्राएललाई तितरबितर पार्नेले तिनीहरूलाई भेला गर्नुहुनेछ, र गोठालाले आफ्‍नो बगाललाई रक्षा गरेझैँ उहाँले तिनीहरूलाई रक्षा गर्नुहुनेछ’।
11 किनभने परमप्रभुले याकूबलाई मोल तिरेर छुटाउनुहुनेछ, र तिनीहरूभन्‍दा शक्तिशालीको हातदेखि तिनीहरूलाई उहाँले छुटकारा दिनुहुनेछ।
12 तिनीहरू आएर सियोनको उच्‍च ठाउँहरूमा आनन्‍दसाथ गाउनेछन्‌। परमप्रभुको प्रशस्‍त वरदानको कारण तिनीहरू रमाहट गर्नेछन्‌– अन्‍न, नयाँ दाखमद्य र तेल, भेड़ाबाख्राका पाठाहरू र गाई-गोरुका बाछाहरूको कारण तिनीहरूले रमाहट गर्नेछन्‌। तिनीहरू प्रशस्‍त पानीले भिजेको बगैँचाजस्‍तै हुनेछ। तिनीहरू फेरि कहिल्‍यै अफसोसी हुनेछैनन्‌।
13 तब तरुणीहरू आनन्‍दले नाच्‍नेछन्‌, र जवान र बूढ़ाहरू हर्षित हुनेछन्‌। म तिनीहरूको शोकलाई हर्षमा परिवर्तन गरिदिनेछु। म तिनीहरूलाई सान्‍त्‍वना दिनेछु र तिनीहरूका अफसोसको सट्टामा रमाहट दिनेछु।
14 पूजाहारीहरूलाई म प्रशस्‍तताले सन्‍तुष्‍ट गराउनेछु, र मेरो प्रजा मेरो उदारताले तृप्‍त हुनेछ,” परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ।
15 परमप्रभु यसो भन्‍नुहुन्‍छ: “रामामा एउटा शब्‍द सुनियो, विलाप र चर्को रोदन, राहेल आफ्‍ना बालकहरूका लागि रोइरहेकी, सान्‍त्‍वना त्‍यसले इन्‍कार गरी, किनकि त्‍यसका बालकहरू अब रहेनन्‌।”
16 परमप्रभु यसो भन्‍नुहुन्‍छ, “रोदनको सोर रोक्‌, आँखाबाट आँसु नखसाल्‌, किनकि तिमीहरूको कामको इनाम पाइनेछ,” परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ, “तिनीहरू शत्रुको देशदेखि फर्केर आउनेछन्‌।
17 यसरी तेरो भविष्‍यको आशा छ। तेरा छोराछोरीहरू तिनीहरूको आफ्‍नै देशमा फर्किआउनेछन्‌।
18 “एफ्राइमको विलाप मैले निश्‍चय नै सुनें: ‘एउटा नसुध्रिएको बाछालाई झैँ तपाईंले मलाई अनुशासन गर्नुभयो, र म अनुशासित भएँ। मलाई पुनर्स्‍थापित गर्नुहोस्‌, र म फर्कनेछु। किनभने तपाईं परमप्रभु मेरा परमेश्‍वर हुनुहुन्‍छ।
19 म बरालिएर गएपछि मैले पश्‍चात्ताप गरें। मैले बुझेपछि मैले मेरो छाती पिटें। म लज्‍जित भएँ, र म होचिएँ, किनभने युवावस्‍थाको कलङ्क मैले बोकेको थिएँ’।
20 के एफ्राइम मेरो प्‍यारो छोरो होइन र, जसमाथि म खुशी हुन्‍छु? त्‍यसको विरुद्धमा मैले जति नै बोले तापनि मलाई त्‍यसैको याद अझैँ आउँछ। यसकारण मेरो हृदय त्‍यसको लागि लालसा गर्दछ। त्‍यसप्रति मेरो साह्रै माया छ,” परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ।
21 “बाटो देखाउने सङ्केत र खम्‍बाहरू खड़ा गर्‌, जुन बाटोबाट तँ जान्‍छस्‌, त्‍यो बाटो याद राख्‌। हे कन्‍या इस्राएल, फर्की। तेरा नगरहरूमा फर्केर आइज।
22 हे विश्‍वासघाती छोरी, तँ कहिलेसम्‍म यताउता गरिबस्‍छेस्‌? परमप्रभुले पृथ्‍वीमा एउटा नयाँ कुरो सृष्‍टि गर्नुहुनेछ– एउटी स्‍त्रीले पुरुषलाई सुरक्षा दिनेछ।”
23 सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्‍छ: “जब म तिनीहरूलाई कैदबाट फर्काएर ल्‍याउनेछु, तब मानिसहरूले यहूदाको देश र त्‍यसका नगरहरूमा यी वचन फेरि प्रयोग गर्नेछन्‌, ‘हे धर्मी वासस्‍थान, हे पवित्र पर्वत, तँलाई परमप्रभुले आशिष्‌ दिऊन्‌’।
24 यहूदा र त्‍यसका सबै नगरहरूमा मानिसहरू एकैसाथ बस्‍नेछन्‌– किसानहरू, र आफ्‍ना बगालसँग घुम्‍ने गोठालाहरू।
25 थाकेकाहरूलाई म फेरि ताजा बनाउनेछु र मूर्च्‍छा खानेहरूलाई सन्‍तुष्‍ट तुल्‍याउनेछु।”
26 यतिमै म बिउँझें र चारैतिर हेरें। मेरो निद्रा मलाई मीठो लागेको थियो।
27 परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ, “दिन आउँदैछन्‌, जब म इस्राएलका घराना र यहूदाका घरानालाई मानिस र पशु दुवैका बच्‍चाहरूले रोप्‍नेछु।
28 जसरी तिनीहरूलाई उखेल्‍न, लछार्न र फ्‍याँक्‍न, र तिनीहरूमाथि सर्वनाश ल्‍याउनलाई मैले मेरो दृष्‍टि तिनीहरूमाथि राखें, त्‍यसरी नै तिनीहरूलाई निर्माण गर्न र रोप्‍नलाई मेरो दृष्‍टि तिनीहरूमाथि राख्‍नेछु,” परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ।
29 “ती दिनमा मानिसहरूले फेरि कहिल्‍यै यसो भन्‍नेछैनन्‌, ‘अमिलो अङ्‌गूर खाए बाबुले अनि दाँत कुँड़िनेचाहिँ छोराछोरी’।
30 त्‍यसको सट्टामा हरेक आफ्‍नै पापको निम्‍ति मर्नेछ। जसले अमिलो अङ्‌गूर खान्‍छ त्‍यसैको दाँत कुँड़िन्‍छ।
31 परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ, “ती दिन आउनेछन्‌, जब इस्राएलको घरानासँग र यहूदाको घरानासँग म एउटा नयाँ करार स्‍थापना गर्नेछु।
32 तिनीहरूका पुर्खाहरूसँग मैले बाँधेको करारजस्‍तै यो हुनेछैन, जब मैले तिनीहरूलाई हातमा समातेर मिश्रदेशबाट डोर्‍याएर ल्‍याएको थिएँ।” परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ, “तिनीहरूले मेरो करार भङ्ग गरे, यद्यपि म तिनीहरूका पिता थिएँ।”
33 परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ, “ती दिनपछि म इस्राएलको घरानासँग यो करार बाँध्‍नेछु, तिनीहरूका मनमा मेरो व्‍यवस्‍था राखिदिनेछु, र तिनीहरूका हृदयमा त्‍यो लेखिदिनेछु, र म तिनीहरूका परमेश्‍वर हुनेछु, र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्‌।
34 ‘परमप्रभुलाई चिन’ भनेर अब उसो कुनै मानिसले आफ्‍नो छिमेकीलाई वा आफ्‍ना दाजुभाइलाई सिकाउनेछैन। किनकि सानादेखि लिएर ठूलासम्‍म तिनीहरू सबैले मलाई चिन्‍नेछन्‌,” परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ। “किनकि तिनीहरूका अपराधहरू म क्षमा गर्नेछु, र म तिनीहरूका पाप फेरि कहिल्‍यै सम्‍झनेछैनँ।”
35 परमप्रभु यसो भन्‍नुहुन्‍छ: जसले दिन उज्‍यालो पार्नलाई सूर्य नियुक्त गर्नुहुन्‍छ, र राती प्रकाश दिनलाई चन्‍द्रमा र ताराहरूलाई आज्ञा गर्नुहुन्‍छ, जसले छालहरू गर्जाउनलाई समुद्र चलाउनुहुन्‍छ– उहाँको नाउँ सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभु हो।
36 “यी विधिहरू मेरो दृष्‍टिबाट लुप्‍त भए भने मात्र इस्राएलको वंश मेरो सामु एक जाति हुनदेखि खतम हुनेछ,” परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ।
37 परमप्रभु यसो भन्‍नुहुन्‍छ: “आकाशलाई नाप्‍न सकियो भने, र पृथ्‍वीको जगलाई खोजेर निकाल्‍न सकियो भने मात्र तिनीहरूले गरेका सबै अधर्मको कारण म इस्राएलका सन्‍तानलाई फालिदिनेछु,” परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ।
38 परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ, “दिनहरू आउँदैछन्‌, जब हननेलको बुर्जादेखि कुनेढोकासम्‍मै सहर फेरि मेरो निम्‍ति बनाइनेछ।
39 नाप्‍ने डोरी त्‍यहाँबाट सीधै गारेब डाँड़ासम्‍म पुग्‍नेछ, र त्‍यहाँबाट घुमेर गोआसम्‍म जानेछ।
40 लाशहरू र खरानी फालिने सारा उपत्‍यका, र पूर्वतिर किद्रोन खोल्‍सासम्‍मका सबै खेतहरू अश्‍व ढोकाको कुनासम्‍म परमप्रभुको निम्‍ति पवित्र हुनेछ। त्‍यो सहर फेरि कहिल्‍यै उखेलिनेछैन अथवा भत्‍काइनेछैन।”
Jeremiah 30 Choose Book & Chapter Jeremiah 32